पर्यटकको यौन हर्कतका कारण कुरुप बन्यो यो युरोपेली टापु, अहिले ‘सेक्स स्पट’ भनेर चिनिन्छ! - Dainik Online Dainik Online
पर्यटकको यौन हर्कतका कारण कुरुप बन्यो यो युरोपेली टापु, अहिले ‘सेक्स स्पट’ भनेर चिनिन्छ!
प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७८, सोमबार ३ : ४३
बार्सिलोना। पर्यटन क्षेत्र प्रायः देशका लागि अर्थतन्त्रको मेरुदन्ड हो। जुन देशले जति विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ त्यति नै विदेशी मुद्रा त्यो देशले आर्जन गर्न सक्छ।
त्यसको ज्वलन्त उदाहरण युरोपको एउटा टापु बनेको छ। पयर्टकहरुको यौन क्रिडास्थल बनेपछि युरोपको एउटा आरक्षण र तटीय किनारा कुरूप बनेको छ।
जर्नल अफ इनभाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्टमा प्रकाशित एउटा अध्ययनअनुसार टापुको तटीय किनार प्रदूषित हुनुमा यौन सम्पर्कका गतिविधि जिम्मेवार छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले तट वरपर २९८ ‘सेक्स स्पट’ फेला पारेका थिए। प्रायः सेक्स स्पट झाडी र वनस्पतियुक्त क्षेत्रमा भेटिएका थिए।
चुरोट, कन्डम, ट्वाईलेट पेपर, वाइप र क्यानका कारण स्थल दुर्गन्धित बनेको छ। बालुवाको थुप्रोलाई उनीहरुले शौचालयको रुपमासमेत प्रयोग गरेका छन्।अनुसन्धानकर्ताहरुले पर्यटकहरुले दिशा पिसाब गर्ने स्थल पहिचान गरेका छन्।
सर्वसाधरणलाई जान प्रतिबन्ध लगाइएका क्षेत्रमासमेत ५६ ओटा सेक्स स्पट भेटिएका थिए। पर्यटकहरुका गतिविधिका कारण आरक्षण क्षेत्रमा वातावरण शिक्षा पनि लागू हुन सकेको थिएन। सुरुमा वातावरणमैत्री शिक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले सो आरक्षण खडा गरिएको थियो।
आनन्द लुट्न आरक्षण क्षेत्रभित्र पसेका पर्यटकहरुले छोडेको कन्डमहरु खाएकै कारण एउटा छेपारोको मृत्यु भएको अनुसन्धान टोलीका लेखक प्याट्रिक हेस्प बताउँछन्।
अनुसन्धानकर्ता हेस्प लेख्छन्, ‘सेक्सका लागि प्रयोग हुने सार्वजनिक स्थल बन्द गर्न आह्वान गर्दैनौं। तर, यसले पु¥याउने क्षतिप्रति सर्वसाधारणको ध्यान जाओस भन्ने चाहन्छौं।’ अनुसन्धान पत्रमा भनिएको छ, ‘एउटा जोडीले सो क्षेत्रमा यौन सम्पर्क गर्नु सामान्य कुरा हो। तर सयौं मानिस एउटै क्षेत्रमा एउटै प्रयोजनका लागि जानु पर्यावरणका दृष्टिले घातक छ।’